यी हुन् सबै'भन्दा धनी अभि'नेता त’लब सुन्नु'भयो भने च’कित पर्नुहुन्छ । —
५ लाख ५५ हजार कित्ता बराबरको आईपीओ खुल्दै
पाथिभरा मताको दर्शन गरी चैत्र २९ गते आईतबारको राशिफल पढ्नुहोस्
इन्डियामा भाइरल भयो ३ बच्चाले गाएको नेपाली गीत, अभिनेता अनुपमले भने यस्तो !
आज केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’को जन्मदिन
हरपल ताजा समाचार र मनोरञ्जनको साथमा
यी हुन् सबै’भन्दा धनी अभि’नेता त’लब सुन्नु’भयो भने च’कित पर्नुहुन्छ ।
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:३३ admin	0 Comments
एजे’न्सी ।संसार मा येस्ता अभि’नेता छन् जस’को तलब सुन्दा’ हामी’लाई अच’म्म लाग्छ ! यिन’लाई द’रक भनेर पनि चिनि’न्छ तर यिनको नाम ‘डवे’न जोन सन् हो यदि त’पाइले रेस्लिं’ग हेर्नुभ’एको छ भने यिन’लाई सजिलै चिन्न’ सक्नु’हुन्छ’ ! पहि’लाका रे’स्लर हुन् रे’स्लिंग छोडेर ह’लियुड तिर लागेका र’क यति फेमस भएकी उनको जति तल’ब कुनै अ’भिनेता को छैन संसार मा हा’लचालको सू’चीअनुसार उनलाई संसार कै सबै’भन्दा धनी अभि’नेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिं’ग का किं’ग केही वर्ष देखि अ’भिनय मा रहेका छन् !
द रक लाई संसार का सबैभन्दा धनी अभिनेता को सुची को पहिलो नम्बर मा रहेका छन् ! यिनी हलियुड मा आएपछि उनिआउनु भन्दा पहिले चलेका स्टारहरू पनि पछि छोडेका छन् ! यस्तो छ, उनको पर्दापछिको जिन्दगी तपाईलाई लाग्न सक्छ की ड्वेन डबल्यूडबल्यूई रिङबाट निक्लिएर सिधै हलिउड गएका हुन् । यदी तपाईले यो सोच्नु भएको छ, भने गलत हुनुहुन्छ । उनी पहिले फुटबल खेलाडी थिए । रेसलर बनेपछि उनलाई अभिनयको अफर आउन थाल्यो ।अहिले ड्वेनको पुरै बर्षको कमाई ४०० करोड भन्दा माथि छ । फोर्ब्सका अनुसार ड्वेनको बार्षिक आम्दानी ४३२ करोड रुपैंया छ ।
यो मामलामा उनलाई हलिउडका केही ठूला कालकारलाई पछि छोडेका छन् । जसमा ज्याकी च्यान, ब्रेड पिट समेत सामेल छन् । पैसाले पैसा तान्छ भनेझै ड्वेन आफ्नी पत्नीको सहयोगमा एक प्रोडक्शन कम्पनी समेत चलाउछन् । यो प्रोडक्शन हाउसले अहिलेसम्म केी सफल फिल्म र टिभी शो निर्माण गरेको छ ।
ड्वेन आफ्ना फ्यानहरुका लागी सँधै केही न केही नयाँ चिज लिएर आउँछन् । उनले फ्लोरिडामा करिब १० वटा घर किनेका छन् । यी सबै घर उनले १० बर्ष भित्र किनेका हुन् । फ्लोरिडामाएक आलिशान घर छ, जसको मूल्य ३७ करोड हो । दास्रो ५ बेडरुमवाला घरको मूल्य २३ करोड रुपैंया हो । २०१२ मा क्यालिफोर्नियामा पनि ६ वेडरुपमवाला घर ३३ करोडमा उनले किनेका छन् । उनको भर्जिनियामा एक फर्म हाउस समेत छ ।उनको शाही सवारी छ । उनको प्राइवेट विजनेश जेट गल्फस्ट्रिम जी ६५० छ । उनी परिवारका साथ यही जेटमा यात्रा गर्छन् ।
मार्केटमा यो जेटको मूल्य करिब ४३५ करोड रुपैंया छ । उनीसँग इटालियन कम्पनीको सुपर कार पागानी ह्युएरा पनि छ । उनी आफै कार चलाउन मन पराउँछन । यो कारको मूल्य ६.७ करोड हो । यस्तै लेम्बोर्गिनी, फेरारी जस्ता महंगा कार समेत उनीसँग छन् । उनी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै खानामा (कड फिस) माछा खान्छन् ।यसको मूल्य १ लाख रुपैंया पर्ने बताइन्छ । आफ्नो फिटनेसका लागि उनी महिनामा लाखौं खर्च गर्छन् । उनलाई घडी एकदमै मनपर्छ । उनले संसारको सबैभन्दा महंगो घडी कम्पनी रोलेक्सको घडी लगाउने गर्छन् । जसको मूल्य लाखौं पर्छ ।
बलिउड स्टार कति नम्बरमा पर्छन् ?
यो सूचीमा बलिउडका शाहरुख खान १० औं नम्बरमा छन् । त्यसपछि अक्षयकुमार १२ औं, सलमान खान १६ औं, अमिताभ बच्चन २१ औं र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ३० औं स्थानमा छन् ।
← विवाह सक्किना साथ बेहुली’ले गरिन बेहुला संग ख’त्रा डान्स (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
यस्ता ६ गुण हुने युवती हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी । →
पुरुषले यस्ता चार कुराहरु गोप्य राखेकै राम्रो !
२१ पुष २०७७, मंगलवार ११:३८ admin	0
अध्ययन भन्छः स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा बढी खुसी हुन्छन् । यसरि ?
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:११ admin	0
२२ बर्षीय युवती जसले आफ्नो खुट्टाको फोटो बेचेरै महिनामा साढे १२ लाख कमाउँछिन् ( यसरि हेर्नुहोस )
३ मंसिर २०७७, बुधबार १०:३३ admin	0
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १६:२४ admin	0
काठमाडौं, चैत २८/ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्रीका लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ।कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार एक
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १५:५२ admin	0
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ११:०७ admin	0
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०९:१० admin	0
पृथ्वीबाट उडेको झण्डै सात महिनापछी मंगल ग्रह पुगेको यानले पठाएको तस्बिर यस्तो छ !
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०४:२२ admin	0
काठमाडौँ : नासाले पठाएको अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको छ । ‘अमेरिकी पर्सिभिअरेन्स’ नाम दिइएको यानले शुक्रबार बिहान
एप्पलद्वारा आईक्लाउडको बग पत्ता लगाउने २ नेपाली सम्मानित
१६ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:१८ admin	0
अस्ट्रेलिया बाट ‘सर्च इञ्जिन’ हटाउने गुगलको चेतावनी
१० माघ २०७७, शनिबार १०:२० admin	0
फेसबुक म्यासेन्जर र इन्स्ट्राग्राम समस्या
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:५२ admin	0
साझासंजाल डटकम एक मनोरन्जनात्मक वेबसाइट हो ! यो साइटमा फिल्मी , मनोरन्जनात्मक , टिप्स तथा जानकारी , रोचक कुराहरु , हेर्न सकिन्छ !